Indawo Yokulima, Abahlinzeki - Abakhiqizi baseChina China
I-Disc plow ye-3 point hitch trekta
Ukulima kwemishini yamapulazi kufakwe ngokuphelele ngogandaganda, ngesikhathi sokusebenza, ama-discs ngokujikeleza kwawo ukuguqula inhlabathi, ikakhulukazi, kufanelekile ukusebenza ensimini ngotshani, utshani neziqu zezitshalo noma izitshalo, ukumelana komhlaba omkhulu kanye nabaningi amatshe kanye nesikebhe, njll. Kuhle ukusika utshani notshani, ngaphandle kokumiswa utshani, inhlabathi noma amatshe, njll. Ngokuya ngesakhiwo, kungahlukaniswa ngezindlela ezahlukahlukene zochungechunge lwe-1LY (T); 1ly uchungechunge; 1lyX uchungechunge; I-1LY (SX) series.he ipulazi imishini yokufakwa epulazini ifakwe ngokuphelele ngogandaganda, ngesikhathi sokusebenza, ama-discs ngokujikeleza kwawo ukuguqula inhlabathi, ikakhulukazi, kufanelekile ukusebenza ensimini ngotshani, utshani neziqu zezitshalo noma izitshalo , ukumelana kwenhlabathi enkulu nangamatshe amaningi kanye nesitini sesitini, njll. Kuhle ukusika utshani notshani, ngaphandle kokumiswa utshani, inhlabathi noma amatshe, njll.
I-Furrow single Plow
Lokhu kukhahlela ohlangothini olulodwa we-8 ~ 20hp wokuhamba ugandaganda, 12hp ~ 20hp mini trekta.
Ifektri Yokunikezela I-Disc Plow YaseTrektha
I-Disc plow ifakwe ngokuphelele ngogandaganda wokuhamba kanye nogandaganda omncane, ngesikhathi sokusebenza, kufanelekile ukusebenza ensimini ngotshani, utshani neziqu zezitshalo noma izitshalo, ukumelana okukhulu kwenhlabathi nangamatshe amaningi nezitini zezitini, njll. Kuhle ukusika utshani notshani futhi kungabikho lapho kumiswa khona ngotshani, inhlabathi noma amatshe, njll. Kuyasebenza emsebenzini ngekhwalithi enhle ngesikhathi sokusebenza. Kulula ukujwayela futhi uqinile.
Ukulima Kabili I-4 Wheel Mini trektha
Igeja luhlobo lwethuluzi lezolimo lokulima. Kuyipulangwe elisamisiwe ngokuphelele, elihlanganiswe nebala elisindayo ekugcineni kogongolo, imvamisa liboshwe ngeqembu lezilwane noma lezimoto elizidonsayo, futhi futhi eliqhutshwa ngamandla omuntu. Isetshenziselwa ukuphula amabhlogo omhlabathi futhi yenze ama-grooves okuhlwanyelwa kuwo.
Isakhiwo esikhanyayo, ukusebenza okulula, ukusebenza kahle okuphezulu
Amahlathi, ukulima izilwane, izilwane zasemanzini, ezolimo
Imibandela Yokukhokha: T / T, L / C, Ikhadi Lesikweletu